စပိန်နိုင်ငံသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုအထိခိုက်ဆုံးနိုင်ငံများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အနည်းဆုံးသောနိုင်ငံများလည်းဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, အများအပြားစပိန်မြို့ကြီးများဘာစီလိုနာ၊ မက်ဒရစ်၊ Valencia၊ Zaragoza၊ Badalona၊ Alcalá de Henares နှင့် Fuenlabrada စသည့် တစ် manifesto မှတဆင့်အခွအေနေရှုတ်ချခဲ့ကြသည်.
မှာ ဗဟိုအစိုးရအနေဖြင့်ရှေ့တွင်ရှိသောအပြောင်းအလဲများအတွက်တိုင်းပြည်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်အရေးတကြီးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ကျနော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလျှင်မနက်ဖြန်မှာတိုင်းပြည်ကို ဦး ဆောင်နေသူတွေလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ passivity ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေကိုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်။
မြို့ကြီးများသည်အများဆုံးကိုလေထုညစ်ညမ်းစေပြီးဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၇၀% ကိုထုတ်လုပ်သည်, နှင့်စပိန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သူတို့ကယခုအချိန်အထိရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အစီအမံယူကြပြီတစ်ခုတည်းသောဖြစ်ကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဘာစီလိုနာစီးတီးကောင်စီက၎င်းတို့အားဗဟိုအစိုးရ၏ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့်အရေးတကြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပါလျှင်၎င်းတို့သည်အသုံးမ ၀ င်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
စာရွက်စာတမ်းအားပေးထားသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော“ ရာသီဥတုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကြေငြာချက်” ကတောင်းဆိုသည် အစိုးရသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုချမှတ်သည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများသုံးစွဲရန်မလိုအပ်တော့သည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိရန် ၂၀၂၀၊ ၂၀၃၀ နှင့် ၂၀၅၀ အတွက်တိုးတက်သောကတိကဝတ်များဖြင့်အတူ။
ထို့ပြင်လည်း သူတို့သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဥပဒေကိုတောင်းဆိုကြသည် »ယခု မှစတင်၍ ကာဗွန်အနိမ့်အမြင့်ကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အခြေအနေများနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များအတွက်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများအစားထိုးခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အရင်းအမြစ်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များရှိသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည် " ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုခက်ခဲစေသည်။
ဒီနေ့ အကြီးအကျယ်ထိရောက်သောအစီအမံများပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်- အဓိကဂေဟစနစ်များ၏ ၄၅% သည်အခြေအနေမကောင်းသောကြောင့်ရာစုနှစ်မကုန်မီနယ်မြေ ၈၀% သည်သဲကန္တာရအမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ရသည်။
သင်က Manifesto ကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖတ်နိုင်သည် ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » စပိန်နိုင်ငံသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုမရင်ဆိုင်ရသေးပါ